ဆုရရှိသင့်သူအချို့ ဆုနှင့် လွဲချော်ခဲ့သည့်အတွက် ပရိသတ်များကြားတွင် မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ် - The Lifestyle Myanmar
The Lifestyle Myanmar
AllBreaking NewsBusiness NewsInternational NewsPoliticsSports News
အားလုံးကရှုံးပြီလို့ သတ်မှတ်ထားရာက နိုင်ငံခြားသားကို အံ့အားသင့်ဖွင့် အနိုင်ထိုးခဲ့တဲ့ သပြေညို
ဝင်ကြေး ယူပြီး တိရစ္ဆာန်တွေကို အငတ်ထားတဲ့ မန္တလေးက တိရစ္ဆာန်ရုံ
အင်္ဂလန်နန်းတော်က ရွှေအတိပြီးတဲ့ အိမ်သာကြီး မနေ့ ညက ခိုးယူခံရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသည့် ထန်းလျက်ကိတ်မုန့် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ( သိန်း ၂၀ ကျော် ) ဖြင့် ၀ယ်ယူသွား
တကယ်ကို ထူးခြားတဲ့ တက္ကစီ ကားဆရာ
မုန်း၍လည်း ကျိန်​စာမတိုက်​နဲ့… ချစ်​ခင်​၍လည်း နောက်​ဘဝပြန်​​တွေ့ပါရ​စေ ဆုမတောင်းပါနဲ့…
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ မြန်မာ အဖြစ် မျက်နှာငယ်ရတာ ရှိခဲ့ပါပြီဗျာ
တစ်ရွာလုံးငတ်ပြတ်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားလေး
AllInternational CelebrityLocal CelebrityMovie & Music
Myanmar Got Talent ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံး Winnerဆုရှင် မောင်ဘုန်းမြတ်မင်း
​ခေးအတွက်​ဆိုပြီး ခံစားချက်​​တွေကို ကဗျာ​လေးနဲ့ ရင်​ဖွင့်​လာတဲ့ ရဲ​လေး
Myanmar’s Got Talent ဖိုင်နယ်တက်သွားသည့် ရွှေတံဆိပ်များရှင် မသန်စွမ်းအားကစား သမား ဝင်းစန်းအောင်(ရုပ်သံ)
အောင်လအန်ဆန်အကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ပါကာ အလိုက်ဖက်ဆုံးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် နေတိုးကို One Championship ရွေးချယ်
ခြေထောက်ကို ဆားရေစိမ်၊ ဆားပွတ်ခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
“သံပရာသီးကို ရေနွေးစိမ်၍ သောက်သင့်ပါသလား” – ဆရာဦးကျော်မြင့် (တိုင်းရင်းဆေး)
ဘန်ကောက်မှာ ဆေးကုတာနဲ့ ဒီမှာဆေးကုတာ ဘာကွာလဲ
အရပ်ပုတဲ့လူတွေဟာ အရပ်ရှည်တဲ့လူတွေထက် ဆီချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ
နောက်ဆုံးထွက် iPhone 11 ရဲ့ သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
အိမ်တံခါးနဲ့ ကားတွေကို ဖွင့်ဖို့ လက်မောင်းထဲမှာ chip တွေ ခွဲထည့်ထားတဲ့ အမျိုးသမီး
အင်တာနက်မသုံးဘဲ ငွေဖြတ်ခံနေရပါသလား ၊ မဖြစ်အောင် ဒါတွေလုပ်ပါ
Home Entertainment ဆုရရှိသင့်သူအချို့ ဆုနှင့် လွဲချော်ခဲ့သည့်အတွက် ပရိသတ်များကြားတွင် မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်
ဆုရရှိသင့်သူအချို့ ဆုနှင့် လွဲချော်ခဲ့သည့်အတွက် ပရိသတ်များကြားတွင် မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်
ဇဏ်ခီနှင့် ခရစ္စတီးနားခီ ၊ နေတိုးနှင့် မိခင်၊ ဇွဲဝေယံထူးနှင့် ဇွဲဝေယံထက်
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ပေးအပ်သည့် အကယ်ဒမီဆုစာရင်းများ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ကြိုတင်ပေါက်ကြားမှုအပေါ် ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဆုရရှိသင့်သူအချို့ ဆု နှင့် လွဲချော်ခဲ့သည့်အတွက် ပရိသတ်များကြားတွင် မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်ပေးအပ်သည့် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲကို မတ် ၂၃ ရက် ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ The One Entertainment ၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဆုပေးပွဲ ကျင်းပနေဆဲအချိန်မှာပင် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုရရှိသူများစာရင်းမှာ လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပြီး ယင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သည့် စာရင်းတွင်ပါဝင်သော စာရင်းအတိုင်း ဆုများပေးအပ်ခဲ့သဖြင့် ပရိသတ်များကြားတွင် ဝေဖန်မှုများစွာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အကယ်ဒမီ ဆန်ခါတင် စာရင်းဝင်ဇာတ်ကားများတွင် ပါဝင်ကာ ပရိသတ်အားပေးမှုများပြားသည့်ဇာတ်ကားအချို့မှ ဆုရရှိသင့်သူ အချို့မှာလည်း ဆုနှင့်လွဲ ချော်ခဲ့သည့်အတွက် ပရိသတ်များကြားတွင် မကျေနပ်မှုများ ပိုမိုပြင်းထန်စေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ရုံတင်ပြသခဲ့သည့် ဇာတ်ကား ၈၃ ကားရှိခဲ့ပြီး ယင်းဇာတ်ကားများထဲမှ အကယ်ဒမီ ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင် ဇာတ်ကားအဖြစ် ၂၅ ကား ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ယင်းဇာတ်ကားများတွင် ပရိသတ် စံချိန်တင်အားပေးခဲ့သည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ၊ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက၏ အရွေ့တစ်ခုအဖြစ် ပရိသတ်များက ယူဆခဲ့သည့် ဇာတ်ကားများ ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုများ ပေးအပ်ရာတွင်မူ ယင်းကဲ့သို့ ပရိသတ် အားပေးမှုများပြားခဲ့သည့် ဇာတ်ကားအချို့ ဆုရရှိခြင်း မရှိခဲ့သည့်အတွက် ပရိသတ်များ၏ဝေဖန်မှု မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ရက်သတ္တပတ်ကြာမြင့်စွာ ရုံတင်ပြသခဲ့ရပြီး နှစ်ကျော့ပြန် ပြသရသည်အထိ ပရိသတ်အားပေးမှု များပြားခဲ့သည့် ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ ဇာတ်ကောင်စရိုက် ပီပြင်မှုကို အသားပေး၍ ခေတ်ကာလ၏ပုံရိပ် များကို မှန်ကန်စွာပုံဖော်ထားခဲ့သည့် ‘မီ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများမှ အကယ်ဒမီဆုနှင့် လွဲချော်ခဲ့သည့်အပြင် မုန်းစွဲဇာတ်ကားတွင် ခက်ခဲသည့် အမူအရာများကို အပီပြင်ဆုံး ပုံဖော်ကာ အနုပညာအရည်အသွေးကို အကောင်းဆုံး ပုံဖော်ခဲ့သည့် အကယ်ဒမီနေတိုးမှာ ဆုနှင့်လွဲချော်ခဲ့ရသည်။ ယင်းသို့ပရိသတ်များ၏ မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာထားခဲ့သည့်ဆု အချို့လွဲချော်ခဲ့သည့်အပြင် ဆုစာရင်းမှာလည်း ကြိုတင်ပေါက်ကြားနေသည့်အတွက် ဝေဖန်မှုများ အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့သည့် အနုပညာရှင်အချို့၏ ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြားမှုအချို့ အပေါ်တွင်လည်း ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သည်။
“ဆုစာရင်းစာရွက် အတိအကျက ကြိုပေါက်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါက အတွင်းစည်းကနေ ပေါက်ကြားတာလား၊ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ အခုပေးခဲ့တဲ့ဆုတွေအပေါ်မှာရော ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ချယုံကြည် ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေအထိ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုဆုစာရင်းတွေ ကြိုပြီး ပေါက်ကြားတာမျိုးကတော့ အရမ်းကို ရှက်စရာလည်း ကောင်းသလို တော်တော်လေးကိုလွဲမှားတဲ့ အခြေအနေလို့ ပြောရပါမယ်။ ပြီးတော့ ဆုရသင့်တဲ့သူတချို့ကို ဆုမပေးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အကယ်ဒမီ စံချိန်စံညွှန်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားစရာဖြစ်ရပါတယ်။ အနုပညာအရည်အသွေးအပေါ် အဓိကသုံးသပ် အကဲဖြတ်တယ်ဆိုရင် အရည်အသွေးအရ သိသာထင်ရှားတဲ့သူတချို့ကို ဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါ တယ်” ဟု အနုပညာရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ခဲ့သည်။
‘မုန်းစွဲ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှင့် ပတ်သက်၍ ပရိသတ်များက အကယ်ဒမီမျှော်မှန်း ပေးခဲ့ကြသော်လည်း လွဲချော်ခဲ့ရသည့် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီနေတိုးက ‘‘ကျွန်တော်တို့ အနုပညာရှင်တွေအတွက်ကတော့ အကယ်ဒမီရဖို့ဆိုတာအတွက် ဖန်တီးကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်ဒမီဆိုတာ လွဲချော်တတ်တဲ့ သဘောတရားလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ကျွန်တော့်ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကို အရင်ကတည်းကလည်း ကျွန်တော် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆုရခြင်း မရခြင်းဆိုတာတွေက အရမ်းကြီး အရေးမပါပါဘူး။ ဒါက အကယ်ဒမီ စိစစ် အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်မှုပေါ့။ အခု ဆုရသွားတဲ့ ဇော်မိုး (သူထူးစံ)ဆိုလည်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းပါ။ သူရတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အားထုတ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မုန်းစွဲဇာတ်ကားထဲက ကိုကြံ့တို့၊ ကို သြရသ၊ ကိုဝင်းလွင်ထက်၊ ဦးအေးတို့အတွက် လည်းဝမ်းသာရသလို တခြားဆုရခဲ့တဲ့ အနုပညာ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေအားလုံးအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူရပါတယ်။ ဆုရတယ် မရဘူးဆိုတာထက် ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးဖြစ်အောင် ဆက်ပြီးကြိုးစားနေမှာပါ’’ဟု ဆိုသည်။
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီကျော်ကျော်ဗိုလ်ကလည်း ‘‘အကယ်ဒမီဆုရခြင်းအတွက် ဝမ်းသာရသလို တကယ့်ကိုအနုပညာအရည်အသွေးအရ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းနေတိုး ဆုနဲ့ လွဲချော်သွားလို့လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဆုရသွားတဲ့ကို ဇော်မိုးအတွက်လည်း ဝမ်းသာရပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်’’ဟု ဆိုသည်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တစ်ဦးက ‘‘အကယ်ဒမီဆိုရင် ရုပ်ရှင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အမြဲ စောင့်ကြည့်အားပေးပေမယ့် နှစ်တိုင်းလည်း အမြဲလွဲချော်နေတော့ တော်တော်လေးကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ အခုနှစ် ပေးသွားတဲ့ဆုတွေကတော့ ပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အရွေ့တစ်ခုဖြစ်စေတဲ့ ဇာတ်ကားတွေလို့ပြောရမယ့် ဥပါယ်တံမျဉ်တို့၊ မီတို့ကနေ ဆုတစ်ခုမှ မပါလာတာ၊ မုန်းစွဲမှာ အမြွှာညီအစ်ကိုနှစ် ယောက်ရဲ့ မတူတဲ့ခံစားမှုကို မြင်သာအောင် အပီပြင်ဆုံးလုပ်သွားတဲ့ ကိုနေတိုးကို ဆုမပေးတာ၊ ကိုယ့်ယောက်ျားကို အရမ်းချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုတွေကို မျက်လုံးတွေမှာပေါ်အောင် လုပ်ပြနိုင်တဲ့ မအေးသောင်း ဆုနဲ့လွဲသွားတာတွေက တော်တော်လေး စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်’’ ဟု ပြောကြားသည်။
Via: Eleven Media
၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျ ပေးအပျသညျ့ အကယျဒမီဆုစာရငျးမြား အှနျလိုငျးပျေါတှငျ ကွိုတငျပေါကျကွားမှုအပျေါ ဝဖေနျမှုမြားထှကျပျေါခဲ့ပွီး ဆုရရှိသငျ့သူအခြို့ ဆုနှငျ့ လှဲခြျောခဲ့သညျ့အတှကျ ပရိသတျမြားကွားတှငျ မကနြေပျမှုမြားဖွဈပျေါ
၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျ ပေးအပျသညျ့ အကယျဒမီဆုစာရငျးမြား အှနျလိုငျးပျေါတှငျ ကွိုတငျပေါကျကွားမှုအပျေါ ဝဖေနျမှုမြား ထှကျပျေါခဲ့ပွီး ဆုရရှိသငျ့သူအခြို့ ဆု နှငျ့ လှဲခြျောခဲ့သညျ့အတှကျ ပရိသတျမြားကွားတှငျ မကနြေပျမှုမြားဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှကျပေးအပျသညျ့ အကယျဒမီထူးခြှနျဆုပေးပှဲကို မတျ ၂၃ ရကျ ညပိုငျးတှငျ ရနျကုနျမွို့ The One Entertainment ၌ ကငျြးပခဲ့ပွီး ဆုပေးပှဲ ကငျြးပနဆေဲအခြိနျမှာပငျ အကယျဒမီ ထူးခြှနျဆုရရှိသူမြားစာရငျးမှာ လူမှုကှနျရကျတှငျ ပြံ့နှံ့လာခဲ့ပွီး ယငျးထှကျပျေါခဲ့သညျ့ စာရငျးတှငျပါဝငျသော စာရငျးအတိုငျး ဆုမြားပေးအပျခဲ့သဖွငျ့ ပရိသတျမြားကွားတှငျ ဝဖေနျမှုမြားစှာ ထှကျပျေါခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ထို့ပွငျ အကယျဒမီ ဆနျခါတငျ စာရငျးဝငျဇာတျကားမြားတှငျ ပါဝငျကာ ပရိသတျအားပေးမှုမြားပွားသညျ့ဇာတျကားအခြို့မှ ဆုရရှိသငျ့သူ အခြို့မှာလညျး ဆုနှငျ့လှဲ ခြျောခဲ့သညျ့အတှကျ ပရိသတျမြားကွားတှငျ မကနြေပျမှုမြား ပိုမိုပွငျးထနျစခေဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး ရုံတငျပွသခဲ့သညျ့ ဇာတျကား ၈၃ ကားရှိခဲ့ပွီး ယငျးဇာတျကားမြားထဲမှ အကယျဒမီ ဆနျခါတငျစာရငျးဝငျ ဇာတျကားအဖွဈ ၂၅ ကား ထုတျပွနျကွညောခဲ့သညျ။ ယငျးဇာတျကားမြားတှငျ ပရိသတျ စံခြိနျတငျအားပေးခဲ့သညျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားမြား၊ မွနျမာ့ရုပျရှငျလောက၏ အရှတေ့ဈခုအဖွဈ ပရိသတျမြားက ယူဆခဲ့သညျ့ ဇာတျကားမြား ပါဝငျခဲ့သျောလညျး အကယျဒမီထူးခြှနျဆုမြား ပေးအပျရာတှငျမူ ယငျးကဲ့သို့ ပရိသတျ အားပေးမှုမြားပွားခဲ့သညျ့ ဇာတျကားအခြို့ ဆုရရှိခွငျး မရှိခဲ့သညျ့အတှကျ ပရိသတျမြား၏ဝဖေနျမှု မွငျ့တကျခဲ့သညျ။ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျး ရကျသတ်တပတျကွာမွငျ့စှာ ရုံတငျပွသခဲ့ရပွီး နှဈကြော့ပွနျ ပွသရသညျအထိ ပရိသတျအားပေးမှု မြားပွားခဲ့သညျ့ ဥပါယျတံမဉျြရုပျရှငျဇာတျကား၊ ဇာတျကောငျစရိုကျ ပီပွငျမှုကို အသားပေး၍ ခတျေကာလ၏ပုံရိပျ မြားကို မှနျကနျစှာပုံဖျောထားခဲ့သညျ့ ‘မီ’ ရုပျရှငျဇာတျကားမြားမှ အကယျဒမီဆုနှငျ့ လှဲခြျောခဲ့သညျ့အပွငျ မုနျးစှဲဇာတျကားတှငျ ခကျခဲသညျ့ အမူအရာမြားကို အပီပွငျဆုံး ပုံဖျောကာ အနုပညာအရညျအသှေးကို အကောငျးဆုံး ပုံဖျောခဲ့သညျ့ အကယျဒမီနတေိုးမှာ ဆုနှငျ့လှဲခြျောခဲ့ရသညျ။ ယငျးသို့ပရိသတျမြား၏ မြှျောလငျ့ခကျြကွီးစှာထားခဲ့သညျ့ဆု အခြို့လှဲခြျောခဲ့သညျ့အပွငျ ဆုစာရငျးမှာလညျး ကွိုတငျပေါကျကွားနသေညျ့အတှကျ ဝဖေနျမှုမြား အရှိနျအဟုနျမွငျ့တကျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ထို့ပွငျ အကယျဒမီထူးခြှနျဆု ရရှိခဲ့သညျ့ အနုပညာရှငျအခြို့၏ ကြေးဇူးတငျ စကားပွောကွားမှုအခြို့ အပျေါတှငျလညျး ဝဖေနျမှုမြားရှိခဲ့သညျ။
“ဆုစာရငျးစာရှကျ အတိအကကြ ကွိုပေါကျတယျဆိုတာ မဖွဈသငျ့တဲ့ကိစ်စပါ။ ဒါက အတှငျးစညျးကနေ ပေါကျကွားတာလား၊ ဘယျလိုဖွဈတာလဲ။ အခုပေးခဲ့တဲ့ဆုတှအေပျေါမှာရော ဘယျလောကျထိ စိတျခယြုံကွညျ ရမလဲဆိုတာမြိုးတှအေထိ ဖွဈစပေါတယျ။ ဒီလိုဆုစာရငျးတှေ ကွိုပွီး ပေါကျကွားတာမြိုးကတော့ အရမျးကို ရှကျစရာလညျး ကောငျးသလို တျောတျောလေးကိုလှဲမှားတဲ့ အခွအေနလေို့ ပွောရပါမယျ။ ပွီးတော့ ဆုရသငျ့တဲ့သူတခြို့ကို ဆုမပေးတာနဲ့ ပတျသကျလို့လညျး အကယျဒမီ စံခြိနျစံညှနျးဆိုတာနဲ့ ပတျသကျပွီး စဉျးစားစရာဖွဈရပါတယျ။ အနုပညာအရညျအသှေးအပျေါ အဓိကသုံးသပျ အကဲဖွတျတယျဆိုရငျ အရညျအသှေးအရ သိသာထငျရှားတဲ့သူတခြို့ကို ဆုနဲ့ပတျသကျပွီး ခနျြလှပျခဲ့တဲ့အပျေါ စိတျမကောငျးဖွဈရပါ တယျ” ဟု အနုပညာရှငျတဈဦးက သုံးသပျခဲ့သညျ။
‘မုနျးစှဲ’ ရုပျရှငျဇာတျကားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပရိသတျမြားက အကယျဒမီမြှျောမှနျး ပေးခဲ့ကွသျောလညျး လှဲခြျောခဲ့ရသညျ့ သရုပျဆောငျ အကယျဒမီနတေိုးက ‘‘ကြှနျတျောတို့ အနုပညာရှငျတှအေတှကျကတော့ အကယျဒမီရဖို့ဆိုတာအတှကျ ဖနျတီးကွတာ မဟုတျပါဘူး။ အကယျဒမီဆိုတာ လှဲခြျောတတျတဲ့ သဘောတရားလညျး ရှိပါတယျ။ ဒါကိုလညျး ကြှနျတေျာ့ကိုခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေို အရငျကတညျးကလညျး ကြှနျတျော ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဆုရခွငျး မရခွငျးဆိုတာတှကေ အရမျးကွီး အရေးမပါပါဘူး။ ဒါက အကယျဒမီ စိစဈ အကဲဖွတျအဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့သုံးသပျအကဲဖွတျမှုပေါ့။ အခု ဆုရသှားတဲ့ ဇျောမိုး (သူထူးစံ)ဆိုလညျး ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးပါ။ သူရတဲ့အတှကျလညျး ဝမျးသာဂုဏျယူပါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့အားလုံး အားထုတျကွိုးစားခဲ့တဲ့ မုနျးစှဲဇာတျကားထဲက ကိုကွံ့တို့၊ ကို သွရသ၊ ကိုဝငျးလှငျထကျ၊ ဦးအေးတို့အတှကျ လညျးဝမျးသာရသလို တခွားဆုရခဲ့တဲ့ အနုပညာ ညီအဈကို မောငျနှမတှအေားလုံးအတှကျ ဝမျးသာဂုဏျယူရပါတယျ။ ဆုရတယျ မရဘူးဆိုတာထကျ ကြှနျတျောကတော့ ကိုယျလုပျစရာရှိတဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို အကောငျးဆုံး အရညျအသှေးဖွဈအောငျ ဆကျပွီးကွိုးစားနမှောပါ’’ဟု ဆိုသညျ။
သရုပျဆောငျ အကယျဒမီကြျောကြျောဗိုလျကလညျး ‘‘အကယျဒမီဆုရခွငျးအတှကျ ဝမျးသာရသလို တကယျ့ကိုအနုပညာအရညျအသှေးအရ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားခဲ့တဲ့ သူငယျခငျြးနတေိုး ဆုနဲ့ လှဲခြျောသှားလို့လညျး စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ။ ဆုရသှားတဲ့ကို ဇျောမိုးအတှကျလညျး ဝမျးသာရပါတယျ။ အဲဒီလိုပဲပွောခငျြပါတယျ’’ဟု ဆိုသညျ။
ရုပျရှငျကွညျ့ပရိသတျတဈဦးက ‘‘အကယျဒမီဆိုရငျ ရုပျရှငျကိုခဈြတဲ့စိတျနဲ့အမွဲ စောငျ့ကွညျ့အားပေးပမေယျ့ နှဈတိုငျးလညျး အမွဲလှဲခြျောနတေော့ တျောတျောလေးကို စိတျပကျြစရာကောငျးပါတယျ။ အခုနှဈ ပေးသှားတဲ့ဆုတှကေတော့ ပွနျသုံးသပျသငျ့တယျလို့ထငျပါတယျ။ ရုပျရှငျလောကရဲ့အရှတေ့ဈခုဖွဈစတေဲ့ ဇာတျကားတှလေို့ပွောရမယျ့ ဥပါယျတံမဉျြတို့၊ မီတို့ကနေ ဆုတဈခုမှ မပါလာတာ၊ မုနျးစှဲမှာ အမွှာညီအဈကိုနှဈ ယောကျရဲ့ မတူတဲ့ခံစားမှုကို မွငျသာအောငျ အပီပွငျဆုံးလုပျသှားတဲ့ ကိုနတေိုးကို ဆုမပေးတာ၊ ကိုယျ့ယောကျြားကို အရမျးခဈြတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ခံစားမှုတှကေို မကျြလုံးတှမှောပျေါအောငျ လုပျပွနိုငျတဲ့ မအေးသောငျး ဆုနဲ့လှဲသှားတာတှကေ တျောတျောလေး စိတျပကျြစရာကောငျးပါတယျ’’ ဟု ပွောကွားသညျ။
Previous articleသိန်းတစ်သောင်းကျော်တန်ဝတ်စုံ၊ အရောင်နုနု၊ အနက်ရောင်တို့ဖြင့် လှပခဲ့သောည
Next articleဇာဏ်ခီရဲ့ ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှု (Self-realization)
Web Master - September 16, 2019
ဘုန်းမြတ်မင်းကတော့ လက်သိုင်း၊ တုတ်သိုင်း၊ ဓားသိုင်း စတဲ့ ခက်ခဲတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ သိုင်းပညာရပ်တွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်ကျော်ပြီး နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ရောက်
ခွေးရဲ့ တံတွေးမှကူးစက်ရောဂါပိုးကြောင့် ခြေထောက်နှစ်ဘက် အပါအဝင် လက်ချောင်းတွေပါ ဖြတ်ပစ်လိုက်ရတဲ့အမျိုးသား
အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာ လိင်ခံစားမှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ကြသလဲ
Marvel ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိသလဲ?
The Lifestyle Myanmar is your one-stop destination for the sense of lifestyles by creating unique editorials. Capturing the essence of lifestyle, Lifestyle Myanmar brings the latest trends from all around the globe. We bring exclusive content on food, fashion, health, entertainment and everything about stylish living.
Contact us: hello@thelifestylemyanmar.com
© Copyright 2018 - The Lifestyle Myanmar